तपाइको वाइफाई नचलेर हैरान हुनुभएको छ ? छिटो बनाउन यसो गर्नुहोस्! - ramechhapkhabar.com
राउटरलाई कहिल्यै भुइँमा राख्नुहुँदैन । त्यसलाई कम्तीमा पनि भुइँदेखि २ फिटको उचाइमा राख्नुपर्छ । किनकि, सिग्नलको दिशा केही तलको भागमा हुन्छ । जसले गर्दा राउटर भुइँमा राख्दा सिग्नलको बाटो अवरुद्ध हुन सक्छ । राउटरलाई टिभी क्याबिनेट वा पर्दापछाडि राख्नुहुँदैन ।
यसलाई खुला स्थानमा राख्दा फ्री सिग्नल हुने कारण गति पनि केही बढी नै हुन्छ ।राउटरलाई टिभी, कर्डलेस, माइक्रोवेभ, फ्रिजजस्ता विद्युतीय उपकरणबाट टाढा राख्नुपर्छ । यस्ता उपकरणले इलेक्ट्रोमेग्नेटिभ वेभ छोड्ने कारण राउटरको सिग्नललाई बाधा पुग्छ ।
वाइफाईको पासवार्ड चोरी हुन नदिन पनि सचेत रहनुपर्छ । त्यसैले पासवर्ड कसैले पनि अनुमान गर्न नसक्ने राख्नुपर्छ । अल्फाबेट, न्युमेरिकल वा अन्य सिग्नल पनि मिसाएर पासवर्ड बनाउनु उचित हुन्छ । राउटर सफ्टवेयरलाई अपग्रेड गरिरहनुपर्छ । विशेषगरी पुरानो राउटर छ भने अझ बढी ख्याल राख्नुपर्छ ।